Josef gwara ụmụnne ya onye ọ bụ (1-15)
Ụmụnne Josef lawara ịga kpọta Jekọb (16-28)
45 Ugbu a, Josef enweghịzi ike ijide onwe ya n’ihu ndị niile na-ejere ya ozi.+ O wee jiri olu ike sị ha: “Unu niile, sinụ ebe a pụọ!” E nweghị onye ọzọ ya na Josef nọ mgbe o mere ka ụmụnne ya mata onye ọ bụ.+ 2 O wee malite ibe ákwá. O besiri ya ike nke na ndị Ijipt na ndị ezinụlọ Fero nụrụ ya. 3 N’ikpeazụ, Josef gwara ụmụnne ya, sị: “Abụ m Josef. Nna m ọ̀ ka nọ ndụ?” Ma ụmụnne ya enweghị ike ịza ya ihe ọ bụla maka na ihe na-emenụ riri ha ọnụ. 4 N’ihi ya, Josef gwara ụmụnne ya, sị: “Biko, bịanụ m nso.” Ha wee bịa ya nso. Ọ sịziri: “Abụ m Josef nwanne unu, onye unu resịrị ndị Ijipt.+ 5 Ma obi ajọla unu njọ, unu atakwala ibe unu ụta maka na unu rere m, e wee kpọta m n’ebe a, n’ihi na ọ bụ Chineke zitere m ka m buru unu ụzọ bịa ebe a ka e wee dowe anyị ndụ.+ 6 Afọ a bụ afọ nke abụọ ụnwụ ga-adị.+ A ka nwere afọ ise a na-agaghị akọ ihe ma ọ bụ wee ihe ubi. 7 Ma Chineke zitere m ka m buru unu ụzọ bịa ebe a ka e wee nwee ndị ga-afọrọ unu ndụ+ n’ụwa nakwa ka o si n’ụzọ dị ebube napụta unu. 8 N’ihi ya, ọ bụghị unu zitere m ebe a, kama ọ bụ ezi Chineke zitere m ka o wee mee ka m bụrụ onye ndụmọdụ* Fero, meekwa ka m bụrụ onyeisi n’ụlọ ya niile na onye na-achị Ijipt niile.+ 9 “Laghachikwurunụ nna m ọsọ ọsọ. Unu ga-asị ya, ‘Nwa gị Josef kwuru, sị: “Chineke emeela ka m bụrụ onyeisi n’Ijipt niile.+ Bịakwute m. Egbula oge.+ 10 Ị ga-ebi n’ala Goshen,+ bụ́ ebe ị ga-anọ m nso, gị na ụmụ gị na ụmụ ụmụ gị na ìgwè ewu na atụrụ gị na ìgwè ehi gị na ihe niile i nwere. 11 M ga na-enye gị ihe oriri n’ebe ahụ, n’ihi na a ka nwere afọ ise ụnwụ ga-adị,+ ka gị na ezinụlọ gị wee ghara ịda ogbenye, ihe niile i nwere alaakwa n’iyi.”’ 12 Unu na Benjamin nwanne m ji anya unu na-ahụ na ọ bụ mụnwa na-agwa unu okwu.+ 13 N’ihi ya, kọọrọnụ nna m na m bụzi onye ukwu n’Ijipt, kọọkwaranụ ya ihe niile unu hụrụ. Ngwa, meenụ ọsọ ọsọ gaa kpọta nna m n’ebe a.” 14 Josef wee makụọ Benjamin nwanne ya, bewe ákwá. Benjamin bewekwara ákwá mgbe Josef makụrụ ya.+ 15 Josef susuru ụmụnne ya niile ọnụ, makụọ ha, beekwa ákwá. Mgbe e mechara, ya na ụmụnne ya kparịtara ụka. 16 Akụkọ ihe na-emenụ ruru ndị nọ n’ụlọ Fero ntị. A gwara ha, sị: “Ụmụnne Josef bịara!” Ihe a Fero na ndị na-ejere ya ozi nụrụ tọrọ ha ụtọ. 17 Fero wee sị Josef: “Gwa ụmụnne gị, sị, ‘Meenụ ihe a: Jirinụ jakị unu buru nri gaa Kenan. 18 Kpọrọnụ nna unu na ndị ezinụlọ unu bịakwute m n’ebe a. M ga-enye unu ihe ọma ndị dị n’ala Ijipt, unu ga-erikwa ihe ndị kacha mma dị n’ala a.’+ 19 Ana m enyekwa gị iwu ka ị gwa ha,+ sị: ‘Meenụ ihe a: Sinụ n’Ijipt buru ụgbọala+ ndị unu ga-eji bute ụmụntakịrị unu na ndị nwunye unu. Unu ga-ejikwa otu bute nna unu n’ebe a.+ 20 Unu echegbula onwe unu maka ihe ndị unu nwere,+ n’ihi na ihe ọma ndị dị n’Ijipt niile bụ nke unu.’” 21 Ụmụ Izrel* wee mee otú ahụ. Josef bunyere ha ụgbọala otú Fero nyere n’iwu. O nyekwara ha ihe ha ga-eri n’ụzọ. 22 Ọ chịnyere onye ọ bụla n’ime ha uwe ọhụrụ, ma o nyere Benjamin narị mkpụrụ ego ọlaọcha atọ (300), chịnyekwa ya uwe ọhụrụ ise.+ 23 O zigaara nna ya ihe ndị a: jakị iri ndị bu ihe ọma ndị si n’Ijipt na nne jakị iri ndị bu ọka wit na achịcha nakwa ihe nna ya ga-eri n’ụzọ. 24 O wee hapụ ụmụnne ya ka ha lawa. Mgbe ha na-ala, ọ sịrị ha: “Unu ewesala ibe unu iwe n’ụzọ.”+ 25 Ha wee si n’Ijipt lawa ma lọghachikwuru Jekọb nna ha na Kenan. 26 Ha wee kọọrọ ya, sị: “Josef ka nọ ndụ, ọ bụkwa ya na-achị Ijipt niile!”+ Ma nna ha atụpụghị ọnụ, n’ihi na o kwetaghị ihe ha kwuru.+ 27 Mgbe ha nọ na-agwa Jekọb nna ha ihe niile Josef gwara ha, ya ahụkwa ụgbọala ndị Josef zitere ka e were bute ya, obi tọwara ya ụtọ. 28 Izrel sịziri: “O zuolanụ! Josef nwa m ka nọ ndụ! M ga-aga hụ ya tupu mụ anwụọ!”+
^ Na Hibru, “nna.”